Garmin Horgalaha 10, oo ah saacadda GPS ee orodka ama socodka | Wararka Gadget
Garmin Forerunner 10, oo ah saacadda GPS ee orodka ama socodka
Suuqa ee saacadaha isboortiga Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo laga kala xusho, marka lagu daro, horumarka tikniyoolajiyadda ayaa u oggolaatay qaybo badan in la yareeyo, taas oo noo suuragelinaysa inaan xirno GPS iyo kormeerida xogta kala duwan ee laxiriira jirkeena.
Loogu talagalay isticmaalaha raadinaya saacad leh GPS-ku dhisan laakiin aan lahayn dhibaatooyin aad u tiro badan iyo qiimo aad u macquul ah oo la awoodi karo, the Garmin Forerunner 10 waa xulashada la tilmaamay. Garmin waa khabiir ku xeel dheer arrimaha hagista iyo barnaamijkeeda Garmin Connect ee khadka tooska ah ka shaqeeya wuxuu hubiyaa aragti aad u faahfaahsan oo ku saabsan kulamadayada tababarka.
1 Feejignaanta iyo dareenka ugu horreeya
2 Ku aadida orod leh Garmin Forerunner 10
3 Daalacanaya fadhiga Garmin Connect
Feejignaanta iyo dareenka ugu horreeya
Garmin Forerunner 10 wuxuu ku yimaadaa sanduuq yar oo uu ku jiro saacaddu had iyo jeer waa la arki karaa mahadnaqa aagga hufan ee ay u abuureen ujeedkan.
Marka sanduuqa uu furmo, waxaan soo saareynaa saacadda oo waxaan arkeynaa in gudaha sidoo kale ay jiraan dukumiintiga iyo saldhigga lacag bixinta ee leh xiriirka USB oo aan u isticmaali doonno inaan dib-u-cusbooneysiinno iskuna waafajinno Garmin Horgalaha 10
Saacadda waa mid aad u fudud oo si fiican ugu habboon qaababka curcurka. Jijimadu waxay ka samaysan tahay cinjir waxayna leedahay godad ballaadhan oo kala jaad ah oo ku habboon wareegyada kala duwan.
Shassiska saacadda ayaa leh cabirka hoos loo dhigay inkasta oo ay xoogaa qaro weyn tahay, qiimaha lagu bixinayo haysashada qalabka wax lagu rito ee GPS iyo batari gudaha ah oo socon kara dhowr kulan oo tababar ah.
Maareynta saacaddu waa mid aad u fudud, tan, Garmin Forerunner 10 Waxay leedahay afar badhan oo ku yaal dhinac kasta.
Waxaan u isticmaali doonnaa lambarka 1 si aan u daarno saacadda oo aan u dhaqaajino iftiinka dambe ee iftiinka hooseeyo.
Lambarka 2 waa midka aan u isticmaali doonno inaan ku bilowno casharkeena, markiisa, waxaa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo xulashada markaan ku jirno liiska.
Badhanka 3 waa midka aan u adeegsan doonno inaanu uga gudubno menus-ka iyo bogagga kala duwan markaan tabobarayno, sidaa darteed waxaan beddeli doonnaa xogta kala duwan ee shaashadda laga soo qaaday
Badhanka 4 waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo dhabarka gacmaha oo dib loogu noqdo menu-kii hore iyada oo aan la adeegsan isbeddelada
Ugu dambeyntiina, haddii aan saacadda rogno waxaan arki doonnaa inay jirto afar xiriir oo fidsan oo la soo xiriiri doona salka lacag-bixinta kaas oo ka mid ahaa. Iyaga ayaynu awood u yeelan doonnaa inaan kal-fadhiyadayada u wareejino kombuyuutarka oo aan dib u buuxino batteriga ku jira.
Ku aadida orod leh Garmin Forerunner 10
In kasta oo aan u isticmaali karno saacadda wax kasta oo aan dooneyno, Garmin Forerunner 10 waxaa loogu talagalay isticmaaleyaasha u baxa orodka ama socodka badanaa.
Shaqada GPS ayaa u shaqeysa safarkayaga ku qor wakhtiga iyo, markooda, waxay muujineysaa masaafada aan ku safreyno shaashadda saacadda.
Si aad u bilowdo kulankeena waa inaad gujisaa batoonka lambar 2 (oo lagu calaamadeeyay doll), waxaan kaa sugeynaa inaad hesho meesha aan ku suganahay waxaanan xaqiijineynaa bilowga howlaha isboortiga.
Shaashadda Garmin Forerunner 10 ayaa yar oo keliya wuxuu soo bandhigayaa laba xogood isku mar. Sidaa darteed, waa inaad riixdaa badhanka ku yaal geeska midig ee hoose si aad u rogto. Marka waan garan karnaa waqtiga aan ordi jirnay, masaafada aan safray, kalooriyada gubatay iyo xawaaraha.
Waxaan ku qeexi karnaa qaafiyadda gacanta saacadda waana habka ugu habboon fadhi u samee hadba baahidayada. Haddaynu xawaaraha ka sarrayno ama haddii aan hoos u soconno, saacaddu way dhawaaqi doontaa oo waxay ina tusaysaa farriin digniin ah si aan ula jaanqaadno socodka ama orodka.
Hawsha kale ee xiisaha leh waa Lap Auto, oo leh, saacaddu si toos ah ayey u calaamadeysaa dhabbaha markasta oo aan safrayno kiiloomitir si aan ula socono waqtiga ay nagu qaadanayso inaan safarkaas masaafada ah ku qaadno.
Ugu dambeyntii, Garmin Forerunner 10 awoodo inuu ogaado marka aan istaagno waxayna si otomaatig ah u joojin doontaa chrono-ka. Si la mid ah, waxay dib u bilaabi doontaa markaan dib ubilaabayno socodka.
Labada shaqo ee garaaca, Lap Auto iyo hakadka otomaatiga ah waa la jari karaa haddiiba aynaan waxtar noo lahayn.
Markaan dhammeyno orodka, kaliya mar labaad riix badhanka adoo ciyaalku ordayo oo keydso wadadii loo maray. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan aragno xogta ugu muhiimsan ee Taariikhda ee saacaddu keydiso, in kasta oo ku habboon tahay Ku dheji kombuyuutarkaaga adoo adeegsanaya barnaamijka Garmin Connect.
Daalacanaya fadhiga Garmin Connect
Si aad u hesho Garmin Connect waa inaan horey u diiwaangalino oo aan ku xirno saacadda dekedda USB kumbuyuutarkayaga adoo adeegsanaya salka ay soo saartay soo saaraha.
Waxaan xamuulnaa hawsha, waxaan xulnay Garmin Horgalaha 10 markaa waad ka soo saari kartaa xogta iyo voila, waxaan horeyba fursad buuxda ugu helnay kulamadeena.
Dhowr ilbiriqsi gudahood, waxaan marin u heli doonnaa xogta waxtar leh sida masaafada la soo safray, waqtiga kal-fadhigu socday, xawaaraha, dhererka la helay, kalooriyada gubatay iyo saadaasha hawada inta aan isboortiga sameynay.
Diiwaanadaas, madashu waxay sidoo kale na siin doontaa a garaaf leh astaanta wadada iyo mid kale oo waqtigaas ah. Dhanka kale, waxaan leenahay khariidad marinka aan sameynay.
Garmin Connect gudaheeda ayaan ku leenahay shaqada ciyaaryahanka ee ka dhigeysa safarkeena wuxuuna muujiyaa waqtiga, wadarta masaafada, dhererka iyo xawaaraha meel kasta oo wadada ah. Waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay baaritaanka horumarkayaga inta tababarku socdo si faahfaahsan.
Garmin Forerunner 10 waa saacad ku habboon kuwa raadinaya shey fudud oo raqiis ah laakiin leh suurtagalnimada adeeg sida Garmin Connect.
Qiimaheeda lagu taliyay waa 129 euro waxaana lagu heli karaa noocyo kala duwan oo kala duwan, iyadoo la dooran karo cagaar, guduud, casaan, madow ama oranji.
Xiriir - Garmin Forerunner 10
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » GPS » Garmin Forerunner 10, oo ah saacadda GPS ee orodka ama socodka
Dib-u-eegistu waa qabow, aad baa loo qiimeeyaa tan iyo markii aan siinayo fikir badan oo hubaal waan soo iibsan doonaa mid. Sidee ayey u tahay saacad ahaan iyada oo loo adeegsanayo si caadi ah?
Ku jawaab albertosf